राम्रोसँग कम्प्युटर र इन्टरनेट कसरी चलाउने ? | Ajako Aartha | Nepal's No. 1 Business News Portal
–start बटनमा क्लिक गरेर Run option (win+R) मा क्लिक गर्नुहोस् ।
–खुलेको window df msconfig टाइप गर्नुहोस् ।
–OK बटनमा क्लिक गर्नुहोस् ।
–System Configuration Utility को window खुल्नेछ ।
–त्यहाँ Start Up Tab मा क्लिक गर्नुहोस् ।
–त्यहाँ आफ्नाे कम्प्युटरमा चलिराखेका प्रोग्रामहरूको लिस्ट र रजिस्ट्री की–हरू देखिनेछ ।
–यो लिस्टमा तपाईंले जुन प्रोग्रामलाई startUp बाट हटाउन चाहनुहुन्छ, त्यसलाई uncheck गर्नुपर्ने हुन्छ ।
–ध्यान दिनुपर्ने कुरा तपाईंले यी प्रोग्रामहरूलाई uncheck गर्दा Antivirus र अरु जरुरी प्रोग्रामहरूलाई uncheck नगर्नुहोला । केवल यस्ता प्रोग्रामहरू मात्र हटाउनुहोस्, जसका बारेमा तपाईंलाई थाहा छ । जस्तै : Winamp Agent, Google Talk, Adobe reader Launche वा अरु तपाईंले install गर्नुभएका install हरू ।
–हिजोआज इन्टरनेट सर्फिङ गर्न सबैलाई मन पर्छ । यो अहिलेको समयमा अपरिहार्यजस्तै बनिसकेको कुरा नकार्न सकिदैन । एक दिन नेटमा बसिएन भने पूरा संसारस“ग सम्बन्ध छुटेको भान हुन थाल्छ ।
–यसरी हेर्दा इन्टरनेट धेरैका लागि आवश्यकता नै बनिसकेको छ । तर, धेरैजसो मान्छेहरूको यो भनाइ छ कि उनीहरूलाई नेट सेर्फिङको दौरान कुनै न कुनै अवाञ्छित समस्याहरूको सामना गर्नुपरेको छ ।
–यसका साथै च्याटिङको बेला चिटिङ गर्ने खालको अनावश्यक म्यासेज पनि आउन थाल्छ । आप्mनो मेल बक्स पनि यस्तै अनावश्यक मेलले भरिएको पाइन्छ । कुनैकुनै मेलले मन लोभ्याउने गरी जरुरी अफरका साथ भाइरस पनि साथै एट्याच गरेर पठाएका हुन्छन् ।
–नेटमा सुरक्षित सर्फिङ गर्नका लागि केके कुरामा सावधानी अपनाउन जरुरी छ त ?
–त्यसो त नेटमा सर्फिङ गर्नु त्यति गाह्रो छैन । सानासाना कुराहरूमा थोरै पनि सतर्क रहेमा यो काम सहज हुन पुग्दछ ।